Isingeniso kwiNcwadi ye-2 yeziKronike
Incwadi yesiKronike yesiBili, incwadi enxulumene neyoku-1 yeziKronike, iyaqhubeka imbali yabantu baseHebhere, ukusuka ekukumkani kukaKumkani uSolomon ekuthunjweni eBhabhiloni.
Nangona i-1 kunye neye-2 yeziKronike ziphindaphinda ezininzi zezinto eziku- 1 Kumkani no- 2 Kumkani , zisondela kwindlela eyahlukileyo. IziKronike, ezibhaliweyo emva kokuthinjwa, ukurekhoda ixesha elide lembali kaYuda, ukushiya ezininzi izinto ezimbi.
Ukuze inzuzo yabathunjwa ababuyayo, ezi ncwadi zibini zinyamezele ukuthobela uThixo , zichaza impumelelo yabaokumkani abathobelayo kunye nokungaphumeleli kookumkani abangathobeliyo. Ukuxoxwa kwezithixo nokungathembeki kuya kugwetywa.
IziKronike zokuQala kunye neye-2 yeziKronike kwakungumnye incwadi kodwa zahlukana kwiingxelo ezimbini, okwesibini kuqala ngokulawula kukaSolomon. ISibini yeziKronike zisebenza ngokukhethekileyo kunye noYuda, ubukumkani basemazantsi, ngokungahoyikanga ubukumkani obukumntla bakwaSirayeli.
Kungekudala emva kokuba babalekele ebukhosini baseYiputa , amaSirayeli akha umnquba , phantsi kolawulo lukaThixo. Le ntente ephathekayo yakhonza njengendawo yokubingelelwa kunye nokunqula amakhulu eminyaka. Njengenkosi yesibili kaSirayeli, uDavide wayecwangcise itempile ephazamisayo yokumhlonela uThixo, kodwa yayinguSolomon unyana wakhe owakhayo ukwakha.
Indoda ehlakaniphile ngakumbi kunazo zonke emhlabeni, uSolomon watshata nabafazi abaninzi bezinye iintlanga, owamkhokelela ekukhulekeleni izithixo, echitha ifa lakhe.
ISibini yeziKronike zibhalisa ukubusa kookumkani ababemlandela, abanye babo babatshabalalisa izithixo kunye neendawo eziphakamileyo, nabanye abaye bavumela unqulo loothixo bobuxoki.
NgomKristu wanamhlanje, iI- 2 yeziKronike zisikhumbuzo sokuthi ukukhonza izithixo kusekhona, nangona kunjalo kwiindlela ezifihlakeleyo. Umyalezo walo usabalulekile: Beka uThixo kuqala ebomini bakho uze ungavumeli nto ifike phakathi kwakho kunye nolwalamano lwakho naye .
Umbhali we-2 yeziKronike
Isithethe samaYuda sidumisa uEzra umbhali njengombhali.
Malunga ne-430 BC
Abantu bamaYuda bamandulo nabo bonke abafundi beBhayibhile.
Indawo ye-2 yeziKronike
IYerusalem, uYuda, uSirayeli.
Izihloko kwi-2 yeziKronike
Iingoma ezintathu zithatha incwadi yesi-2 yeziKronike: Isithembiso sikaThixo kuDavide kwisihlalo sobukhosi esingunaphakade, umnqweno kaThixo wokuhlala ethempelini lakhe elingcwele, kunye nokunikela kukaThixo okuqhubekayo yokuxolelwa .
UThixo wamhlonela umnqophiso wakhe noDavide ukumisa indlu kaDavide, okanye ukubusa ngonaphakade. Ookumkani basemhlabeni babengenakukwenza oko, kodwa enye inzala kaDavide yayinguYesu Kristu , ngoku olawula ezulwini ngonaphakade. UYesu, "uNyana kaDavide" kunye noKumkani weeKumkani, naye wakhonza njengoMesiya, umbingelelo ogqibeleleyo owafa ngenxa yosindiso lomntu .
NgoDavide noSolomon, uThixo wamisa itempile yakhe, apho abantu beza kunqula khona. Ithempeli likaSolomon labhujiswa ngabantu baseBhabhiloni, kodwa ngoKristu, itempile kaThixo yayisungulwa ngonaphakade njengeCawe. Ngoku, ngokubhaptizwa, uMoya oyiNgcwele uhlala ngaphakathi kuyo yonke ikholwa, umzimba wayo itempile (1 Korinte 3:16).
Ekugqibeleni, umxholo wesono , ukulahlekelwa, ukubuyela kuThixo, nokubuyiselwa kwimizuzu yesibini yesiKronike.
Ngokucacileyo uThixo unguThixo wothando nokuxolela, uhlala esamkela abantwana bakhe abaguqukayo kuye.
Abalingisi abalulekileyo kwi-2 yeziKronike
USolomon, ukumkanikazi waseShebha, uRehobhowam, uAsa, uYehoshafati , uAhabhi, uYehoram, uYowashe, u-Uziya, uAhazi, uHezekiya, uManase, uYosiya.
2 IziKronike 1: 11-12
UThixo wathi kuSolomon, "Ngenxa yokuba le nto inomnqweno wenhliziyo yakho kwaye awuceli ubucebile, impahla okanye uzuko, nangenxa yokufa kweentshaba zakho, kwaye ekubeni awuzange ubucelele ubomi obude kodwa ubulumko nobungqina bokulawula abantu endikubeke ukumkani, ngoko kuya kunikwa ubulumko nolwazi. Kwaye ndiya kuninika ubutyebi, impahla kunye nodumo, njengokungabikho nkosi owayengaphambi kokuba ube nako kwaye akukho emva kokuba uya kuba nako. " ( NIV )
... ukuba abantu bam, ababizwa ngegama lam, baya kuthobeka baze bathandaze bafune ubuso bam kwaye bajike ezindleleni zabo ezimbi, ndiza kuva e zulwini, ndibaxolele isono sabo ndiphilise ilizwe labo.
2 IziKronike 36: 15-17
UYehova, uThixo wooyise, wathuma kubo ngokuphindaphindiweyo abathunywa bakhe, ngokuba waba nesihe kubantu bakhe nasezindaweni zakhe zokuhlala. Kodwa bahlekisa izithunywa zikaThixo, badelela amazwi akhe bahlekisa ngabaprofeti bakhe, kwada kwavutha umsindo kaNdikhoyo ebantwini bakhe kwaye kwakungekho nto. Wenyusa kubo ukumkani waseBhabheli, wabulala amajaha abo ngekrele endlwini engcwele, akayikuzikhusela amantombazana namancinci, abasweleyo okanye abagulayo. UThixo wabanikela bonke esandleni sikaNebhukadenetsare. (NIV)
Inkcazo yeNcwadi ye-2 yeziKronike
USolomon uyilungisa, wakha aze anikezele itempile-2 yeziKronike 1: 1-7: 22.
Impumelelo kaSolomon kunye nodumo - 2 IziKronike 8: 1-9: 31.
Ukubusa kukaRehobhowam, unyana kaSolomon - 2 IziKronike 10: 1-12: 16.
Ukubusa kookumkani abalungileyo nabangendawo - 2 IziKronike 13: 1-36: 16.
Ukuthunjwa eBhabheli- 2 IziKronike 36: 17-21.
Ukubuyiselwa kwabantu bakaThixo kwiSirayeli-2 IziKronike 36: 22-23.
Incwadi ka Yoweli
UAron - uMbingeleli oPhakamileyo wokuqala kaSirayeli
Isingeniso kwiNcwadi kaHezekile
Ngubani uBharaki eBhayibhileni?
Intshayelelo kwiNcwadi yeNdumiso
Ezi zixhobo ezintsha ze-Putters Zinceda abaGoli be-Boss i-Moss
IWideout - Inkcazo Nenkcazo
I-Slash noBurn Agriculture
I-Saint Joseph College (I-Indiana) I-Admissions